I-Semalt: Amafomu Okuthuthukile Okugaxekile Nendlela Yokuwaqeda
U-Lisa Mitchell, i-8 (Semalt iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende, ikukhumbuza ukuthi ifomu eliphambili lokugaxekile lifikile, futhi lingalimaza i-Google Analytics ezinsukwini ezimbalwa. Kufanele ukhathazeke uma iwebhusayithi yakho ithola okuningi kwezithuthi. Qinisekisa ukuthi ukuvakashelwa owutholayo kuvela emithonjeni evumelekile, hhayi ku-spam yokudluliselwa. Iqembu lama-spambots lishaya i-intanethi nsuku zonke, futhi ukuvakashelwa kwabo kuvela kumawebhusayithi njengenkinobho-for-website.com, darodar - вашей vbulletin.com, ne-free-share-buttons.com.
Kungani abakwa-spammers basebenzisa ukugaxekile kogaxekile?
Kuphephile ukusho ukuthi kunenqwaba yezindlela zokugaxekile, kodwa umbuzo ngubani osizakalayo ekuthungeni izimoto. Omunye umbuzo ongase uthathe ingqondo yakho yingakho abakwa-spammers basebenzisa ugaxekile wokudluliselwa. Impendulo elula futhi elula yale mibuzo i-spam yokudluliselwa kuyisitayela sokukhangisa kwabakwa-webmasters. Abakwa-spammers banethemba lokuthi uzobona imithombo yabo yokudlulisela futhi bavakashele amawebhusayithi abo ukuthenga imikhiqizo namasevisi abo.
Isizathu sesibili ukuthi abakwa-spammers basebenzisa ukudluliselwa kogaxekile futhi bakhe izixhumanisi emuva kumawebhusayithi abo. Kungenxa yokuthi amanye amasayithi ashicilela ama-analytics awo kwi-intanethi ukudala ama-backlink ngenani elibalulekile. Uma uvakashela lawa ma-URL, ukuxhuma emuva kusayithi labo kuzokwenziwa ngokuzenzakalelayo. Kusobala ukuthi abakwa-spammers benza imali eningi kumasu aphuthayo..Kusuka kuzikhangiso ezinhlelweni ezihambisanayo kanye nokuthola imali yokubuyisela emuva, bayothola okuningi futhi bahlele izinhlelo eziningi zokugaxekile ukuze bakhohlise abasebenzisi.
I-spambot ingena kanjani kudatha yakho yokudlulisela i-Google Analytics?
Kunezindlela ezimbili eziyinhloko ama-spambots angena kuzo idatha yakho yokudlulisela i-Google Analytics. Owokuqala ukukhomba inombolo enkulu yamawebhusayithi. I-Google Analytics isebenzisa inamba yocingo yama-akhawunti, futhi ama-spambot alayishe ngezikhathi ezithile amakhodi akho ezinkripthi zawo ukuze avimbe ukubuka kwekhasi kumaseva awo. Ngivumele lapha ngikutshele ukuthi abakaze bavakashele iwebhusayithi yakho futhi bakukhohlise ngokudala ukubonakala kwamanga. Konke okudingayo yizinombolo ze-akhawunti ye-Google Analytics ezingaba neningi lemali kubo.
Okwesibili, i-Google inebhobhu nezinsipho zokukhahlela futhi zikhomba amawebhusayithi. Ama-Spambots avakashela amawebhusayithi akho, ukukhiqiza ukubukwa kwekhasi kanye nesilinganiso sokunciphisa ngaso sonke isikhathi siphakeme kunezinga elivamile. Idatha yabo ingene ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics. Kuzo zombili izimo, i-bots kanye nezikripthi zihlose izinhlobonhlobo ze-HTTP ezingalungile futhi zizobeka ukuthunyelwa kwazo kunoma yiziphi izixhumanisi. Bafuna ukuthuthukisa amawebhusayithi abo ngenye indlela noma enye, futhi uma i-Google Analytics ihlola le datha, izixhumanisi zabo zithunyelwa ngokuzenzekelayo.
Izindlela zokuyeka ukuthunyelwa kogaxekile
Lapha siye saxoxa ngezindlela zokumisa ukugaxekile kogaxekile.
Indlela №1: I-Hostname Filter
Ezinye ze-spam yokudluliselwa ngeke zize kuwebhusayithi yakho futhi zibonise amagama amabizo. Ngakho, kulula kuwe ukwakha isihlungi segama lomsingathi futhi uvimbele labo abagaxekile. Igama lomphathi kufanele libe iwebhusayithi yakho futhi kufanele libe nekhodi efana ne-Shopify ne-PayPal.
Indlela №2: I-Source Filter
Kumelwe ukuba uqaphele ukuthi abagaxekile bahamba ngqo ekhasini lakho bese basebenzisa izizinda zakho njengegama labo lomkhosi. Ngakho-ke, kufanele udale izihlungi zomthombo ukuze uziqede ngokushesha ngangokunokwenzeka. Ngenkathi udala isihlungi esinjalo, kufanele ukhumbule ukuthi inani labalingiswa lingu-255 kusihlungi ngasinye.